an-trano > Mifandraisa aminay
Mpanamboatra akanjo mandihy matihanina izahay. Nanome serivisy ara-barotra vahiny izahay hatramin'ny nananganana ny orinasa. Manana ekipa matihanina manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny famolavolana, famokarana ary marketing. Miarahaba anay santionany ho namboarina.
Ny fahaizan'ny orinasan-tsika dia singa 100000 isam-bolana. Misy maherin'ny 200 ny famokarana matihanina, 150 ny kojakoja fanodinana lokomotika isan-karazany ary andalana famokarana 8. Hamarino fa haingana sy avo lenta ny fanaterana ny vokatra.
Manana zavamaniry famokarana roa any Hubei sy Guangdong izahay, tongasoa anay hifanakalo sy hitsidika.
Matetika izahay dia maharitra 5 ka hatramin'ny 15 andro amin'ny famokarana, ny fandefasana ary ny fandefasana eo am-pelatananao. Raha apetrakao izao ny kaomandinao dia hohafohezinay araka izay azo atao ny fotoana.
Orinasa ballet fitdance
Mpanampy: No. 70, Làlana Nanzheng, Tanànan'i Dangyang, Faritanin'i Hubei
Phone: + 86-13707208559